Bat clip kunye nezinye iindlela zokubhiyozela iHalloween kulo nyaka | Imisebenzi yezandla
UJenny monge | | Imisebenzi yeHalloween
Molweni nonke! Kubugcisa banamhlanje sikubonisa indlela elula nekhawulezayo yokwenza imihombiso yeHalloween. Kungenzeka ukuba kulo nyaka lo mbutho awunakubhiyozelwa ngenxa yezizathu zokhuseleko, nangona kunjalo oko akuthethi ukuba sinokuyihombisa indlu yethu silusapho kwaye sichithe iholide yokonwabisa.
Ngaba uyafuna ukubona ukuba ungazenza njani ezi zixhobo zokubamba kunye nezinye izimvo zokuhombisa?
1 Izinto esiza kuzifuna
Izinto esiza kuzifuna
Isinxibo somthi, okanye ipinki emnyama yokunxiba ukuba sele sinayo
Isiphawuli esimnyama esimnyama (ukuba kufuneka sipeyinte i-caliper), ungasebenzisa naluphi na olunye uhlobo lwepeyinti elisebenza ngomthi kwaye elingathathi ixesha elide ukuba lome.
Obu bubugcisa obulula kakhulu bokwenza ukuba sikwazi ukwenza le-clip-ye-bat amaxesha amaninzi kwaye siyibeke kuyo yonke indlu ukuhombisa.
Into yokuqala esiza kuyenza kukuba peyinta into yokunxiba eyenziwe ngomthi. Siza kupenda uninzi lwamalulwane esiza kuwenza, ukuze zome xa sigqiba ukupeyinta nokwenza ezinye iziqwenga zobugcisa.
Kwikhadibhodi emnyama siza kuyenza zoba iphiko le-bat esiza kunqunyulwa ukuba linalo njengetemplate kwaye senze amaphiko amabini ku-clamp nganye
Xa sele sizilungiselele zonke iziqwenga, lixesha lokuba glu amaphiko amabini kwiklip nganye. Kule nto siza kusebenzisa i-silicone eshushu okanye enye iglu eyomileyo ekhawulezayo elungisa iziqwenga kakuhle. Ngokukhetha sinokongeza amehlo amabini, kwimeko enjalo, kungcono ukubeka uqinisa kwicala lalo.
Olunye uhombiso olulula lweHalloween ukwenza njengentsapho sicebisa:
Umtshayelo wegqwirha ukuhombisa ngeHalloween
Kwaye ulungile! Ngoku singazisebenzisa zonke ezi zimvo ukuze sisebenzise usuku lokuzonwabisa nosapho.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Imisebenzi yezandla » Izihlandlo ezikhethekileyo » Imisebenzi yeHalloween » Bat clip kunye nezinye iindlela zokubhiyozela iHalloween kulo nyaka
Indawo ephambili yokuhombisa ekwindla